“जैविक विविधताले पृथ्वीलाई जीवन्त र ऊर्जावान बनाएको छ” - Janabato
“जैविक विविधताले पृथ्वीलाई जीवन्त र ऊर्जावान बनाएको छ”
सी चिनफिङले दिनुभएको मन्तव्यको नेपाली अनुवाद
२०७८ असोज ३० गते शनिवार ०६:०४ मा प्रकाशित
(चीनको कुनमिङ सहरमा अक्टोबर १२ बाट सुरू भएको जैविक विविधताको महासन्धिका सम्बद्ध पक्षहरूको पन्ध्रौँ बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले दिनुभएको मन्तव्यको नेपाली अनुवाद)
महिला तथा सज्जनवृन्द !
सन्ध्याकालीन अभिवादन !
जैविक विविधताको महासन्धिका सम्बद्ध पक्षहरूको सम्मेलनको पन्धौँ बैठकमा सहभागीहरूसँग कुनमिङमा भर्चुअल माध्यमबाट भेट्न पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको छ । चीन सरकार र चिनियाँ जनताका साथै मेरो व्यक्तिगततर्फबाट पनि म सबै विशिष्ट पाहुनाहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दछु ।
चिनियाँ भाषामा एउटा भनाइ छ, ‘सद्भावका साथ बाँच्ने र प्रकृतिबाट पोषण पाउने सबै प्राणीको फलिफाप हुन्छ ।’ जैविक विविधताले पृथ्वीलाई पूर्णरूपमा जीवन्त र ऊर्जावान बनाएको छ । जैविक विविधताले मानव जीवन र विकासको जग बसालेको छ । जैविक विविधताको संरक्षणले हाम्रो साझा घर पृथ्वीको संरक्षण गर्न मद्दत गरेको छ । साथै, मानव समुदायको दिगो विकासमा त्यसले योगदान पु¥याउँछ ।
‘पर्यावरणीय सभ्यताः पृथ्वीमा सबै प्राणीको साझा भविष्य निर्माण’ भन्ने मूल नाराका साथ कुनमिङमा भइरहेको सम्मेलनको विशेष महत्व छ । यो सम्मेलनले सन् २०२० को विश्वव्यापी जैविक विविधता ढाँचा बनेयता महत्वपूर्ण निर्णय र निष्कर्ष निकाल्न टेवा पु¥याउनेछ । भविष्यमा विश्वव्यापी जैविक विविधता संरक्षणको लागि लक्ष्य र बाटा निर्धारणको निम्ति यसले मद्दत गर्नेछ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, आपसी सहमति निर्माण गर्नुपर्छ र पृथ्वीलाई सबै प्राणीको साझा बनाउन शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ ।
मानिस र प्रकृति सद्भावपूर्वक सहअस्तित्वमा बाँच्नुपर्छ । हामीले प्रकृतिको संरक्षण गरे प्रकृतिले सहृदयतापूर्वक हामीलाई पुरस्कृत गर्नेछ । हामीले प्रकृतिको निर्मम दोहन गरे, उसले पनि हामीलाई निर्दयतापूर्वक सजाय गर्नेछ । हामीले प्रकृतिको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ, प्रकृतिको आदर गर्नुपर्छ । प्राकृतिक नियमको पालना गर्नुपर्छ र प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दामात्र हामी मानिस र प्रकृतिबीच सद्भावपूर्वक सहअस्तित्व भएको घर बनाउन सक्छौँ ।
हरित पहाडहरू सुनौला पहाड र चाँदीका पहाडहरू हुन् । चुस्त पर्यावरण र वातावरण मात्र प्राकृतिक सम्पत्ति होइन, बरू आर्थिक सम्पदा पनि हुन् । तिनले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षमता तथा गतिलाई पनि प्रभावित बनाउने गर्छ । हामीले हरित शैलीको विकास प्रवद्र्धन गर्न हाम्रा प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । अनि, सबै पक्षको जीत हुने आर्थिक विकास र वातावरणीय संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दामात्र हामी अर्थतन्त्र र वातावरणको समन्वयात्मक विकास गर्नसक्छौँ ।
कोभिड–१९ महामारीले विश्वव्यापी विकासमाथि छाया पारेको छ । त्यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय २०३० को दिगो विकासको मुद्दामाथि चुनौती थपेको छ । आर्थिक पुनस्र्थापना र वातावरणीय संरक्षणको दोहोरो जिम्मेवारी सामना गर्दै विकासशील देशहरूलाई सबै खालका मद्दत र समर्थनको थप खाँचो परेको छ । हामीले प्रतिकूलता चिर्न ऐक्यबद्धतालाई बलियो बनाउनुपरेको छ । विकासका फल र स्वस्थ वातावरणबाट सबै देशले थप र न्यायपूर्ण तरिकाबाट लाभ उठाउन सक्ने परिस्थिति बनाउन जरूरी छ । त्यसबाट हामीले सबै देशको साझा विकासको बाटो खोल्न सक्छौँ ।
हामी आज चुनौतीका पहाड र आशाका किरण दुवै सम्मिलित युगमा बाँचेका छौँ । हामीले सुझबुझपूर्वक काम गर्दासम्म हाम्रो उज्यालो भविष्य क्षितिजमा देखापर्छ । हाम्रो साझा भविष्यको लागि हामी हातमा हात मिलाएर हिँड्नुपर्छ र मानव समुदायको लागि उच्च गुणस्तरीय विकासको नयाँ यात्रा थालनी गर्नुपर्छ ।
प्रथमतः हामीले पर्यावरणीय सभ्यताको विकासलाई मानिस र प्रकृतिबीच समन्वयको लागि हाम्रो निर्देशकको रूपमा लिनुपर्छ । हामीले औद्योगिक सभ्यताले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पर्यावरण र वातावरणको परिधिभित्र मानिसको गतिविधिलाई सीमित राख्नुपर्छ । पहाड, नदी, जङ्गल, जमिन, ताल, घाँसेमैदान र मरूभूमिको समग्रतामा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, विश्वव्यापी दिगो विकासको लागि हाम्रा प्रयासलाई अघि बढाउन हामी हरित सङ्क्रमणबाट निर्देशित गर्नुपर्छ । हामीले हरित वातावरण, न्यून कार्बन र गतिशील आर्थिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । पर्यावरणीय शक्तिलाई विकासको शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हरित पहाड र सफा पानीले दिनसक्ने लाभ हामीले लिन सक्नुपर्छ । हामीले हरित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यतर्फ पाइला अघि बढाउनुपर्छ र सबै देशले हरित विकासका फल बाँडचुँड गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, हामीले सामाजिक समता र न्यायलाई प्रवद्र्धन गरेर मानिसको भलाइमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । उत्तम जीवन, वातावरण संरक्षणमा सबैको हित हुने परिणामको अपेक्षा, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र अन्य उपलब्धिका निम्ति जनताको भावनालाई मनमा राख्नुपर्छ । साथै, सबै देशका जनताको परिपूर्णता, खुसी र सुरक्षा बढाउनुपर्छ ।
चौथोँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन प्रणालीको आधार बनाउनुपर्छ । हामीले खास बहुपक्षतावादको अभ्यास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र पालना गर्नुपर्छ । कसैको इच्छाकै भरमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दुरूपयोग वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । हामीले तय गरेका वातावरण संरक्षणसम्बन्धी लक्ष्य एकातिर महत्वाकाङ्क्षी हुनुपर्छ र अर्कोतिर गतिशील तथा सन्तुलित हुनुपर्छ । जसले विश्वव्यापी वातावरणीय प्रणाली न्यायपूर्ण र थप समतामूलक बनाउनेछ ।
पर्यावरणीय सभ्यताको विकासमा चीनले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेको छ । हालसालै दक्षिणपश्चिम चीनको युनान प्रान्तका एक बथान हात्तीको उत्तरतिरको यात्रा र पुनरागमनको घटनाले जङ्गली जनावर संरक्षणको निम्ति हामीले गरिरहेका प्रयास प्रस्ट झल्काएको छ । चीनले पर्यावरणीय प्रगतिलाई अघि बढाइरहनेछ । सबैको खोजमूलक, समन्वयात्मक, हरित र खुला विकास तथा सुन्दर चीन निर्माणमा जोड दिँदै विकासको नयाँ दर्शन कार्यान्वयनमा चीन कटिबद्ध छ ।
आजको यही मौकामा म चीनले कुनमिङ जैविक विविधता कोष स्थापनाको घोषणा गर्न चाहन्छु । सो कोषअन्तर्गत विकासशील देशहरूका जैविक विविधता संरक्षणमा समर्थन जुटाउन १ अर्ब ५० करोड आरएमबीको लगानीमार्फत यो प्रयासको थालनी गर्न चाहन्छ । सो कोषमा आ–आफ्नो तर्फबाट योगदानको निम्ति चीन सबै पक्षसमक्ष आह्वान गर्दछ ।
जैविक विविधता संरक्षण बलियो बनाउन चीनले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई मूल आधार बनाएर संरक्षित क्षेत्र प्रणाली स्थापनामा तीव्रता दिइरहेको छ । यस क्रममा प्राकृतिक पर्या–पर्यावरणको निम्ति ठूलो महत्व भएका क्षेत्र, विशिष्ट प्राकृतिक भूबनोट भएका ठाउँ, सबभन्दा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा र सबभन्दा विशाल जैविक विविधताको भण्डारलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र समावेश गरिनेछ । चीनले औपचारिकरूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जको पहिलो समूह घोषणा गरिसकेको छ । त्यसअन्तर्गत तीन नदी स्रोत राष्ट्रिय निकुञ्ज, जाइन्ट पान्डा राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरपूर्वी चीन बाघ र चितुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज, हैनान उष्णीय जङ्गल राष्ट्रिय निकुञ्ज र उइशान राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि छन् । संरक्षित क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल २ लाख ३० हजार वर्ग किलोमिटर छ । ती निकुञ्जमा चीनमा पाइने स्थलीय जङ्गली प्राणीमध्ये झन्डै ३० प्रतिशतको बसोबास छ । यसैबीच स्थलगत र अन्तरस्थलीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्ने क्रममा चीनले पेइचिङ र क्वानचाओमा राष्ट्रिय जैविक उद्यान बनाउन थालेको छ ।
कार्बन उचाइ (कार्बन पिक) र सन्तुलन (न्युट्रालिटी) को लक्ष्य हासिल गर्न चीनले विभिन्न प्रमुख क्षेत्रमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन उचाइ पु¥याउनेका साथै त्यसलाई टेवा दिने विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । कार्बन उचाइ र कार्बन सन्तुलनको निम्ति चीनले ‘१ प्लस एन’ नीतिगत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । चीनले आफ्नो औद्योगिक संरचना र ऊर्जा मिश्रणको पुनःसमायोजनलाई निरन्तरता दिनेछ । चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा विशेष महत्व दिनेछ । बलौटे, पत्थरयुक्त र मरूभूमिमा वायु ऊर्जा र प्रकाश ऊर्जाको लागि आधार बनाउन तीव्रगतिमा काम गर्ने चीनले योजना बनाइरहेको छ । पहिलो चरणको परियोजनाअन्तर्गत झन्डै १० करोड किलोवाट क्षमताको परियोजना स्थापना गर्ने काम दु्रतगतिमा भइरहेको छ ।
यदि हामीले यो प्रकृतिलाई असफल नबनाए प्रकृतिले हामीलाई असफल बनाउनेछैन । पर्यावरणीय सभ्यताले मानिसको सभ्यताको विकासको प्रवाहको प्रतिनिधित्व गर्छ । हामी हातमा हात मिलाएर पर्यावरणीय सभ्यताको दर्शनलाई पछ्याऔँ र भावी पुस्तालाई हाम्रो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरौँ । पृथ्वीलाई सबै प्राणलीको समुदाय र हामी सबैको लागि सफा र सुन्दर विश्व बनाउन साझा प्रयास अघि बढाऔँ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा भगवत् गीता –एस.जी.सरदेसाई